amadoda abaningi babeyazi kubaluleke kangakanani ukuncoma nasemantombazaneni, kodwa ngokuvamile ngithole amazwi afanele kungaba nzima kakhulu, ingasaphathwa beveza into yokuqala nakakhulu. Abesilisa ungase uphawule ingubo entsha noma kwekhanda, uma kukhona okuye kwashintsha kakhulu. Cishe ngeke ukubona umthunzi wakho entsha izinwele noma bekwazisa imigexo esimnandi. Futhi kuphela labo efanele isihambile abesifazane ukuyenga, uyakwazi intombazane acacile kakhulu izincomo emnandi. Ake Ake sifunde kancane kuzo.
Kuyini yena, ukuncoma ephelele?
Kukhona neze impendulo ngqo kulo mbuzo. I ukuncoma engcono intombazane - ngobuqotho. Ungazami kube yinkohliso, futhi usungula into. Kuyinto kuphela phakathi kwabantu zinombono ngokuthi inkulumo ethi "Amehlo akho anjengomhlambi engapheli ichibi eluhlaza okwesibhakabhaka, ngilungele ukucwila kuwo kuze kube phakade" ukulingana ngamunye futhi iyiphi elicibilikile yila mazwi. Ezimweni eziningi, lutho kodwa uhleko, abazange kubangele. Kodwa Ncoma ngobuqotho "th-th-th ezinye Muffin okumnandi, azinakho kudliwa kusukela ebuntwaneni" kuyoba mnandi kakhulu. Ngakho umthetho wokuqala - ngobuqotho. Awazi ukuthi ukuba qotho - ingasaphathwa izilokotho.
Thola sici wentombazane esiyingqayizivele - inselele amadoda oqondile. Linganisela dimples wakhe, freckles funny noma ukudlala imvukuzane kwi lip wakhe engenhla. Lena isignali nganoma yisiphi lady ukuthi ubeyisibenzi ekhethekile futhi eyingqayizivele. Awunayo ukutshela ibinzana bafunda mayelana blue echwebeni, futhi wathola charm wakhe siqu. Okunjalo enhle izincomo entombazaneni ukuba anqobe ngo ngamaphesenti ayikhulu yesikhathi. Yiqiniso, uma ungenawo ukusho amazwi anjengokuthi, "Kunjani kodwa wayexhuga cute" noma "Ungene ngisho ukukhuluma lokhu idolo." Khona-ke ungathatha ingozi hhayi nje kokuba amehlo esingu, kodwa futhi ukuze uthole ngempama kumfanele ebusweni.
Kanjani ukuba banqobe umuzi, izindlela ezifana ngazo ziyasebenza nakomama abesifazane. Uma owesifazane ngokukhethekile agqoke ingubo yakho enhle kakhulu, futhi isigamu sehora, bephuma wezinwele, ecabanga umsebenzi wakho ongcwele ukutshela izincomo zakhe. Futhi ukwenza kanjalo kufanele konke yabalindi kumqashi wakhe siqu. Lezi imithetho esingashiwongo. Nokho, uma uyenza ukuncoma lapho wayekhathele futhi selikhathele uma elibukeka 100, kuyoba ngcono udumo kuye futhi ibhonasi enkulu kakhulu kuwe mathupha. A ukuncoma nasemantombazaneni kulokhu kufana namafutha ukuphulukiswa. Mtshele ukuthi intombazane isiphelelwe elimnandi kangaka, lapho izinwele zakhe singcolile. Linganisela okusebenza kanye namasevisi, kodwa kulokhu kwancibilika ngempela.
Sikhuluma yokuqonda izinto ezingaphezu kwemvelo
Njengabangaqondakali njengoba lokhu kungase kuzwakale iseluleko, kodwa ngokuqinisekile okusebenza. A ukuncoma nasemantombazaneni kungase kusekelwe imiqondo ezifana ngesikhathi sokuzalwa komuntu, ikusasa, amandla ezikhangayo. Zonke ladies intuitively kholwa ukudalelwa futhi nje ukuqondana kwezinto. Ngakho uma uthi, "Iyini ngokongamela wangiyisa lapha, ngakho ngaqala ukwazi yena ingelosi?" - uzothola nesizathu esizwakalayo ukukhuluma. Kusukela lezi zibonakaliso musa ukumuka, akekho umuntu ozikhukhumezayo. Yisho ku lomuntu wakho namuhla bajwayelane wesifazane omuhle kakhulu emhlabeni, futhi yilokho impela okwenzekile. Smile - kungcono okungenani kuthanda wena ngemva kwalokhu. Ukudonsa amandla - icala ekhethekile. Wonke umuntu wesifazane okuzelwe ukuyengela nokuheha wobulili obuhlukile. Ngakho-ke isu kuye ukuthi livela ke, lokhu amandla Amazing awukwazi ukuthatha amehlo akhe wakhe ingxenye yesine ihora, futhi lokhu owesifazane yakho! ukuncoma enjalo for girls uba isiqinisekiso isimiso zayo zemvelo ngakho-ke usebenza. Zama izincomo ezihlukahlukene, bakhethe wesifazane amaphupho akhe futhi akuphishekele ngesibindi. Ngikufisela inhlahla!
Izingosi - Kuyini? imithetho zokuxhumana
Interior umhlobiso, izinhlobo kanye nezici
Kanjani ukuze ome izinhlanzi, hhayi ukundiza emzaneni? Ibhokisi for omiswe inhlanzi
Izitayela ezithandwayo: isikwele esinokuvala kwangaphambili
Kanjani ukuba ungakhathazeki ngaphambi ukusebenza? Amacebo eziwusizo